कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज चैत्र २६ गते मंगलबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज चैत्र २६ गते मंगलबारको राशिफल !
प्रकाशित : सोमबार, चैत २५, २०७५१७:२४ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७५ साल चैत २६ गते। मंगलबार। इश्वी सन् २०१९ अप्रिल ९ तारिख। शकसंवत् १९४१। परिधावी संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ चौलाथ्व। चैत्र शुक्लपक्ष। तिथि– चतुर्थी, १४:५९ बजेउप्रान्त पञ्चमी। नक्षत्र– कृत्तिका, ९:३३ बजेउप्रान्त रोहिणी। योग– आयुष्मान्, १८:१३ बजेउप्रान्त सौभाग्य। करण– भद्रा, १४:५९ बजेदेखि वव, २६:३३ बजेउप्रान्त वालव। आनन्दादिमा गद योग। चन्द्रराशि– वृष। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:४८ बजे, सूर्यास्त– १८:२५ बजे र दिनमान ३१ घडी ३१ पला। मंगल–चौथी व्रत।
परिवार र कार्यक्षेत्रमा सम्झौतापूर्ण व्यवहार संघर्ष स्थगित गर्नु हुनेछ । वाणीमा नियन्त्रण नहुँदा कसैको साथ वादविवाद या झगडा हुने सम्भावना रहेको छ । स्त्री वर्गबाट लाभ हुनेछ । मनको निराशताके तपाइँमा नकारात्मक विचार आउनेछ । अत्याधिक धन खर्च हुनेछ । खान-पनमा संयम राख्नु पर्दछ ।
विचारको दृढताको साथ सावधानीपूर्वक काम गर्नु हुनेछ । व्यवस्थित रुपबाट आर्थिक विषयको आयोजना गर्न सक्नु हुनेछ । आफ्नो कलात्मक भावमा निखारता ल्याउन सक्नु हुनेछ । वस्त्र, आभूषण, सौन्दर्य प्रसाधन र मनोरंजनको लागी धन खर्च हुनेछ । सुख शान्ती छाउनेछ । उत्तम दाम्पत्य जिवनको अनुभूति हुनेछ । धन लाभको आशा राख्न सक्नु हुनेछ ।
तपाइँको वाणी र व्यवहारले गलत अर्थ लाग्न सक्दछ । कुटुम्बीजन तथा सम्बन्धीको साथ निकै सम्हालिएर रहनु होला । बिमारी या दुर्घटनाको योग रहेको हुँदा सावधानी अपनाउनु होला । मान-प्रतिष्ठामा हानी पुग्न सक्दछ । खर्चको मात्रा बढ्नेछ । विशेष रुपले मनोरंजनको निम्ति खर्च हुनेछ । दिमागलाई शान्त राख्नु होला ।
आर्थिक योजना र नयाँ कार्यको लागी राम्री दिन रहेको छ । व्यापारमा लाभ, नोकरीमा पदोन्नति र आय श्रोतमा वृद्धि हुँदा आनन्द र सन्तोषको भावना रहनेछ । मित्र, पत्नी र पुत्रको तर्फबाट लाभ हुनुका साथै शुभ समाचार पनि मिल्नेछ । मांगलिक कार्य हुनेछ । प्रवास तथा वैवाहिक योग छ । प्रणयको लागी अनुकुल दिन रहेको छ । उत्तम वैवाहिक सुखको आनन्द उठाउन सक्नु हुनेछ ।
नोकरी तथा व्यवसायको क्षेत्रमा लाभदायक र सफल दिन रहेको छ । कर्यक्षेत्रमा प्रभुत्व र प्रभाव जमाउन सक्नु हुनेछ । भरपूर आत्मविश्वास र दृढ मनोबलको साथ तपाइँको कार्य सरलतापूर्वक पुरा हुनेछ । शिर्ष अधिकारीहरु द्वारा कामको कदर हुनेछ । पदोन्नतिको सम्भावना रहनेछ । पिताबाट लाभ हुनेछ । जमिन तथा वहान सम्बन्धी कामकाजको लागी अनुकुल समय छ ।
तपाइँको दिन धार्मिक प्रवित्तिमा व्यतित हुनेछ । कुनै तिर्थ स्थल जाने सम्भावना रहेको छ । विदेश गमनको लागी अवसरहरु निर्मित हुनेछन् । भाइ-वन्धुबाट लाभ हुनेछ । अफिसमा शिर्ष अधिकारीहरुको साथ सम्हालिएर बस्नु होला । आर्थिक लाभ हुनेछ । शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता रहनेछ ।
आकस्मिक धन लाभको योग रहेको छ । आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त गर्नको लागी उचित दिन रहेको छ । नयाँ कार्य शुरु नगर्नु होला । स्वास्थ्यमा ध्यान राख्नु होला । हितशत्रु तपाइँको अहित गर्ने प्रयास गर्नेछन् । जलशाय र स्त्री वर्गबाट सचेत रहनु होला । इश्वर भक्ति र गहिरो चिन्तन शक्तिले मनलाई शान्ती दिनेछ ।
दैनिक घटना चक्रको प्रवृत्तिमा आज परिवर्तन आउनेछ । मोज-मस्ती र मनोरंजनको दुनियाँमा घुम्ने मूड बन्नेछ । यसमा मित्र र कुटुम्बीजनको साथ मिल्नेछ । सार्वजनिक जिवनमा मान-प्रतिष्ठा बढ्नेछ । नयाँ वस्त्र परिधान र वहान सुखको प्राप्ति हुनेछ । भागीदारबाट लाभ हुनेछ । दाम्पत्य जिवनको उत्तम क्षण अनुभव गर्नु हुनेछ । प्रिय व्यक्ति संग भेटघाटको साथै धनलाभ हुनेछ ।
नोकरी गर्नेको लागी लाभदायक दिन रहेको छ । घरमा आनन्दको वातावरण रहनेछ । नोकर र सहकर्मीको पुरा साथ मिल्नेछ । कार्यमा सफलता र यसक प्राप्ति हुनेछ । स्त्री मित्रको स्काथ भेट हुनेछ ।
कला तथा साहित्य क्षेत्रमा रुचि राख्नेले कार्य क्षेत्रमा विशेष योगदान दिन सक्नेछन् । आफ्नो रचनात्मक र सृजनात्मक शक्तिको परिचय गराउन सक्नु हुनेछ । प्रेमीको साथ घनिष्टताको अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ । उनीहरु संगको भेट रोमाञ्चक बन्नेछ । शेयरबाट लाभ हुएञ्छ । मित्रजनबाट लाभ पाउन सकिनेछ ।
स्वभावमा अधिक भावुकता हुँदा मानसिक अशान्ती रहनेछ । आर्थिक विषयको आयोजना हुनेछ । माताको तर्फबाट अधिक प्रेम र भावनाको अनुभव हुनेछ । स्त्रीको सौन्दर्य प्रसाधन र वास्त्राभुषणको किनमेलमा खर्च हुनेछ । विद्यार्थीलाई पढाइमा सफलता मिल्नेछ । सार्वजनिक रुपमा मानहानी नहोस् यसको पूर्ण ख्याल राख्नु होला ।
कार्य सफलताको लागी र महत्वपूर्ण निर्णय लिनको लागी उत्तम दिन रहेको छ । विचारमा स्थिरता रहनेछ । कुअनि पनि कार्य राम्रो संग हल गर्न सक्नु हुनेछ । कलाकारलाई कला प्रदर्शन गर्ने मौका मिल्नेछ । कलाकारिताको कदर हुनेछ । जिवनसाथीको साथ अधिक निकटता अनुभव गर्नु हुनेछ । मित्रको साथ छोटो यात्रा या पर्यटन हुनेछ । प्रतिस्पर्धी माथि विजय प्राप्त हुनेछ ।
कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार २२ गते आइतबारको राशिफल !